Inona avy ireo lalàna mifehy ny haavo 3 any Afrika atsimo?
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Afrika atsimo » Inona avy ireo lalàna mifehy ny haavo 3 any Afrika atsimo?
Entanina mafy ny rehetra hanohy hanaraka ny lalàna
Ny filoham-pirenena afrikanina atsimo, Cyril Ramaphosa, dia nanambara omaly hariva fa hanalefaka ny firenena ny sasany amin'ireo fameperana COVID-3 haavo 19 avy hatrany.
Ireto fanitsiana manaraka ireto dia mihatra izao:
Manomboka amin'ny 11 ora alina ka hatramin'ny 4 ora maraina izao ny ora famandrihana.
Orinasa tsy ilaina, toy ny: trano fisakafoanana sy fisotroana tsy maintsy mihidy amin'ny 10 ora alina.
Amin'ny toeram-pivoriana ho an'ny daholobe, olona tsy mihoatra ny 50 no avela hiditra ao an-trano sy olona 100 any ivelany; na izany aza, ny toeram-pivoriana dia mety tsy mihoatra ny 50% amin'ny fahafahany.
Ny fivarotana alikaola amin'ny fivarotana antsinjarany dia avela, fa ny alatsinainy ka hatramin'ny alakamisy eo anelanelan'ny 10 maraina ka hatramin'ny 6 hariva.
Ny fanjifana zava-pisotro misy alikaola eo an-toerana dia tsy avela afa-tsy amin'ny fivarotana fahazoan-dàlana manomboka amin'ny 10 maraina ka hatramin'ny 10 alina.
Ny toeram-pambolena divay sy labiera kely dia mety hivarotra alikaola amin'ny fanjifana eny an-toerana mandritra ny ora fiasan'izy ireo ara-dalàna.
Ny moron-dranomasina, tohodrano, renirano, dobo filomanosana ary valan-javaboary dia sokafana amin'ny alalàn'ny fitsangatsanganana ara-tsosialy sy ny fahasalamana.
Voarara ny ankamaroan'ny fivoriana anatiny sy ivelany, ao anatin'izany ny: fiaraha-mikorana, hetsika ara-politika, fivorian'ny filankevitra nentim-paharazana ary fivoriambe eny amin'ny kianja filalaovana.
Ny fanaovana sarontava no lalàna, ary raha tsy manaraka dia heverina ho fandikan-dalàna azo sazy.
Fizahan-tany any Cape Town miarahaba ny fanambaran'ny filoha Ramaphosa ary manantena ny hahita hetsika manan-danja sasantsasany amin'ny sehatry ny fizahan-tany sy ny fandraisam-bahiny izao satria nesorina ny fameperana maro. Entanina mafy ny rehetra hanohy hanaraka ny lalàna. Manaova saron-tava foana, manadio tsy tapaka, tompon'andraikitra rehefa mivoaka sy manodidina, ary alao antoka fa tompon'andraikitra amin'izany koa ny mpitsidika anao. Covid-19 Mbola tena zava-misy iainantsika ary mbola mila manao izay farany vitany ny olona mba hanasongadinana ny fiolahana ary tsy hametraka ny fianakaviany sy ny namany, ny mpiasa ary ny vondrom-piarahamonina ao anaty loza tsy ilaina. Aleo ataontsika tsara! Andao ataontsika any Cape Town!
Thailand: mpizahatany dimy tapitrisa amin'ny 2021 no hahita fahombiazana
Adin-tsaina eo amin'ny fiaraha-monina, fisaraham-bazana ary soatoavina ara-pitondrantena